Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-73
« Newsletter n° 73
Newsletter n° 73 [ENG] »
publié par Admin, le dimanche 23 avril 2017
NY LESONA TOKONY HO TSOAHANA AINGANA
AVY AMIN’NY ANDIANY VOALOHANY
TAMIN’NY FAMETRAHANA FARITRA FAMPIASAM-BOLA
MIKASIKA NY FAMBOLENA (ZIA) AO VAKINANKARATRA
Miomana ny hanitatra ny fametrahana ny faritra fampiasam-bola mikasika ny fambolena (zones d’investissements agricole, ZIA) any amin’ny faritra maro hafa ny mpanandratra azy nefa ny fanaovana tombana ny andiany voalohan’ny ZIA  tao Vakinankaratra dia nampisongadina olana maro goavana izay mitaky mangarahara tanteraka avy amin’ny mpanandratra azy sy fanajàna ny zon’ny mponina.
Tao amin’ny Fanambarana nataony tamin’ny 25 jolay 2016 ny CRAAD-OI sy ny Collectif TANY dia efa naneho ny fahasahiranan-tsainy manoloana ny fandroahana ireo tantsaha madinika an-jatony izay niasa sy namelo-maso ny tany efa am-polotaona maro, nefa very na mety ho very antom-pivelomana ao aorian’ny fametrahana ny ZIA ao amin’ny faritra Vakinankaratra.
Voahitsakitsaka ny zon’ny tantsaha aman-jatony
Nisy atrikasa nanaovana tombana io andiany voalohany amin’ny fametrahana ny ZIA ao Vakinankaratra io tamin’ny volana febroary 2017, izay nampiseho fa tsy misy vahaolana momba ny tany takalony na onitra natolotra ireo hiharan’ny fandroahana ; manohy mifanipy andraikitra momba ny fitsaboana ny olana ny tompon’andraikitra any ifotony sy eo anivon’ny faritra, na efa misy aza ny fepetra manery azy hanolotra vahaolana rehefa misy fandroahana an-katerena.
Marobe ohatra ny mponina voaraoka noho ny ZIA ao amin’ny kaominin’Ibity. Notsipihin’ny Ben’ny Tanàna fa tsy manana tany atao takalo hatolotra ireo olona voaraoka ny kaominina ka anjaran’ny Faritra sy/na ny mpampiasa vola no miantoka ny fanatanterahana izany. Vao maika mahatsiravina ny fisehoan-javatra satria efa voarara tsy handia amin’ireo sombin-tany sy hampiasa azy ho an’ny fivelomany intsony ireo tantsaha voaraoka nefa ilay mpampiasa vola nomena ilay tany tsy mbola nanomboka niasa teo akory.
Fanampin’izany, ny zava-misy ao Andravola, dia noroahana ireo mponina nipetraka teo amin’ny faritra havadika ho ZIA fa fikambanana tantsaha avy any amin’ny faritra hafa tonga hampiasa vola amin’ny fambolena soja no nomena azy. Izany fomba fiasa ampiasain’ny mpanandratra ny ZIA izany, izay « manendaka ny akanjon’ny Petera hanafiana an’i Paoly », dia sady tsy mitombona ara-drariny, no miteraka disadisa eo amin’ny samy tantsaha, ao anatin’ny toe-draharaha izay mihatra aman’aina ny mikasika ny fananan-tany.
Tsy mahafa-po mihitsy ny fitambaran’ny fepetra mikasika ny fampiasam-bola any amin’ny ZIA.
Nandritry ny atrikasa nanaovana tombana, na ireo mpampiasa vola aza dia nitaky ny hametrahana maso-tsivana mazava momba ny fahatanterahana, manoloana ny lesoka amin’ny ambaratonga maro voatsikafona nandritry ny atrikasa.
Amin’ny ankapobeny, ny firosoana tamin’ny fanatanterahana ny tetikasa momba ny ZIA hono dia niafara tamin’ny fialan’ny mpampiasa vola 9 tamin’ireo 23 voafantina tany am-boalohany. Mazava fa betsaka ny lafiny tsy tonga lafatra teo amin’ny fanaraha-maso sy fitiliana ny fanatanterahana ny tetikasa teo amin’ny ZIA, hany ka hatramin’ny nanombohana ny fametrahana ny ZIA dia iray ihany ny mpampiasa vola no voaraoka noho ny tsy fanajany ny votoatin’ny fanekena momba ny fampiasana vola. Betsaka anefa ny madilana tena mampanahy mafy eo anivon’ny fitantanana ny tany izay sady matroka fa tsy mangarahara no misy fisehoan-javatra hafahafa maro.
Voalaza ohatra fa ny tantsaha madinika izay nomen’ny kaominina sasany tany 5 hekitara dia voatery mandoa hofan’izany tany izany toa ny mpampiasa vola, anefa tokony nomena azy maimaim-poana izany noho ny zo ananany sy ny tsy fahampian’ny eo an-tànana hamokarany (actifs productifs, enti-mihetsika mamokatra) miohotra amin’ny an’ny mpampiasa vola.
Ankoatr’izay, nisy mpampiasa vola sasany nitaraina fa efa nanomboka « nandoa vola im-betsaka ho an’ny tany izay azony » nefa tsy nahazo antoka momba ny zony amin’ny tany avy amin’ny Faritra. Miteraka fanontaniana momba ny tena votoatin’ny fifanarahana misy eo amin’ny roa tonta izany : mitaky zo fananan-tany sy fitompoana amin’ny tany ve ireo mpampiasa vola sa zo mikasika ny fampiasana ny tany ? Marihina fa tsy nisy valiny nomena io fanontaniana io mandritry ny atrikasa.
Mangataka ny hampijanonana ny fametrahan ZIA ao amin’ny faritra Vakinankaratra ny fikambanan’ny tantsaha
Manoloana ny loza manjo ny tantsaha madinika izay efa voaraoka na mbola mety ho voaraoka amin’ny andiany faharoan’ny fametrahana ny ZIA izay kasaina hatao ao aoriana, dia nangataka ireo solotenan’ny fikambanan’ny tantsaha nanatrika ny atrikasa fanaovana tombana, ny hampijanonana ny fanomezana tany ny mpampiasa vola ao Vakinankaratra fa manimba tanteraka ny fiainan’ny tantsaha madinika izay mivelona araka ny fambolena ara-pianakaviana izany. Mangataka kosa izy mba ho ny tantsaha miasa araka ny fambolena ara-pianakaviana no hizaràn’ny Faritra ny taniny sisa « tsy misy mampiasa ».
Manarak izany, miangavy ny mpanandratra ny ZIA ny tantsaha mba hampijanona ny fanomezana ny tany itoerany sy nomaintisiny molaly ho an’ny mpampiasa vola. Ny tany lava volo tsy ampiasain’ny mpamboly sy mpiompy no tokony homena ny mpampiasa vola satria izy ireo manana ny fitaovana hitrongisana azy.
Ny CRAAD-OI sy ny Collectif TANY dia mampahatsiahy indray ireo mpanandratra ny ZIA, teknisiana sy mpanapa-kevitra fa tsy azo ialàna ny fanomezana lanja ny safidin’ny tantsaha raha tiana hitera-bokatra ny hevitra sy asa izay mahakasika ny antom-pivelomany sy ny zony amin’ny tany. Ny fahafahany mizaka ny tany sy mampiasa ny harena voajanahary ary ny fifehezan’ny fianakavian’ny tantsaha ny asa fambolena ataony dia zo fototra tsy maintsy hajaina, mba tsy ahatonga ireo tompon’ny zo ara-drariny ireo haneho ny tsy fankasitrahany amin’ny fomba samihafa ka hanafoana ny fientanan’ny mpampiasa vola.
21 avrily 2017
Amin’ny anaran’ny Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI)
Randriamaro Zo, craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com
Amin’ny anaran’ny Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
Rakotondrainibe Mamy, patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info
 Tao amin’ny atrikasa nanaovana tombana ny vokatry ny andiany voalohan’ny fametrahana ny ZIA, izay natao ny 09 febroary 2017 tao amin’ny Centre Lovasoa, Antsirabe, nokarakarain’ny Ministeram-panjakana miandraikitra ny tetikasan’ny fiadidiana ny Repoblika sy fanajariana ny tany ary ny fampitaovana - M2pate - ary ny Ministeran’ny fambolena sy ny Fiompiana.